Agrochemical Fekitori | China Agrochemical Vagadziri, Vatengesi
Fekitori inopa alpha-Chloralose CAS 15879-93-3 nemutengo wakanaka
Apex 1kg, 25kg bhegi kana sezvo chikumbiro
alpha-Chloralose is a crystalline powder is soluble in water, unny soluble in alcohol, diethyl ether, glacial acetic acid, zvishoma zvinonyungudika mu chloroform, zvisingaite insoluble mu petroleum ether.
alpha-Chloralose inogadzirwa nemhinduro yeglucose isina chloral isina mvura pasi pekupisa.
Hwakanaka Hunhu & Kurumidza Kuendesa
Kinetin, pakutanga yaifungidzirwa kuti chigadzirwa chakagadzirwa, yakasarudzika sehormone yemiti kana cytokinin. Cytokinins inoshanda seyakakosha kukura mahormone ayo anogona kukanganisa maseru kukura uye kusiyanisa mune zvinomera uye zvisina kudyara matishu. Kinetin inowanikwa mune yekudyara maseru masisitimu, anosanganisira chirimwa midzi nodules uye endosperm mvura yemutsva, mudiki coconut michero.
Mesosulfuron-methyl is sulfonylurea herbicide, iyo inoshandiswa kudzora ryegrass mune gorosi uye rakazara-rakasiya masora mune zvimwe zviyo.
Molluscicide Metaldehyde CAS 108-62-3 Uraya Snails
Metaldehyde imolluscicide inoshandiswa mumhando dzakasiyana dzemuriwo uye chishongo chirimwa mumunda kana greenhouse, pamiti yemichero, zvidyarwa zvemichero, kana muavocado kana minda yemichero yemichero, zvinomera zvebheri, uye zvirimwa zvebhanana. Metaldehyde inoshandiswa kukwezva uye kuuraya slugs uye hozhwa.
Phosphobacteria Bacillus Megaterium Upfu
Bacillus megaterium iyi cytokinin inosimudzira bhakitiriya inoshandiswa kusimudzira midzi midzi kukura. Izvo zvinogona kunyorera Bacillus megaterium iri kuongororwa mumarenje ekusimudzira kurimwa kwerenje naKöberl nevamwe. Iyo ine gramu-yakanaka, tsvimbo yakaita, spore inogadzira mabhakitiriya. Inoshandiswa mu biocontrol yezvirwere zvezvirimwa.
Mhashu Killer Metarhizium Anisopliae Powder
Metarhizium anisopliae fungus inokura zvakasikwa muvhu pasirese uye inokonzera hosha muzvipembenene zvakasiyana nekuita sechirwere; izvi ndezve entomopathogenic fungi. Inozivikanwa kutapukisa zvinopfuura mazana maviri ezvipembenene, kusanganisira mbeva. Parizvino irikushandiswa semushonga wezvipukanana kudzora tumwe tupukanana twakaita semhashu, mhashu, muchenje, thrips, nezvimwe.
Nitrogen Kugadziriswa Azotobacter chroococcum Powder
Azotobacter chroococcum ibhakitiriya iro rinokwanisa kugadzirisa senitrogen yemuchadenga. Yaive yekutanga aerobic, yemahara-inorarama nitrogen fixer yakawanikwa. A. chroococcum inogona kubatsira kugadzirisa nitrogen muzvirimwa se biofertilizer, fungicide, uye chiratidzo chemuviri, uye mune bioremediation.
Biofertilizer Actinomycetes Powder kana Liquid
Actinomycetes chimwe chezvinhu zvakadaro chinopa akasiyana mametabolite enoveli. Aya anowanikwa munzvimbo dzakasiyana senge, mvura yakachena, ivhu, manyowa uye munzvimbo yegungwa. Actinomycetes anowanzo gadzira akasiyana maantibioti ane rakasarudzika basa uye anoshanda kurwisa akasiyana mabhakitiriya uye fungi.
Biological Inoculants Streptomyces Microflavus Poda
Streptomyces microflavus hutachiona hwehutachiona kubva kune genus reStreptomyces iro rakasiyaniswa kubva muvhu. Icho chizvarwa chitsva cheakitinomyces, chinogona kuita kuti zvirimwa zvidzivirirwe nezvirwere, kutonhora uye kusanaya kwemvura, kugadzirisa hutachiona hwekudyara; Iri kusimudzira hutachiona, inogona kusimudzira kumera kwezvirimwa, midzi yakasimukira, mashizha akasimba, kunhuwirira kwemichero, nezvimwe.
Biofertilizer Bacillus Laterosporus Upfu
Bacillus Laterosporus Natural Fertilizer Ivhu rinogadzirisa ivhu Kugadziridza Miti Improver Natural pesticide Inokurudzira kuwanikwa kwevhu phosphorus. Inoderedza kukuvara kwezvirimwa nekusimudza ivhu remunyu index.
Paenibacillus polymyxa, inozivikanwawo seBacillus polymyxa, ibhakitiriya reGram-positive rinokwanisa kugadzirisa nitrogen. Inowanikwa muvhu, zvidyarwa zvezvirimwa, zvisikwa zvegungwa uye zvitubu zvinopisa. Inogona kunge iine chinzvimbo mumasango ecosystem uye angangoitika ekushandisa senge biofertilizer uye biocontrol mumiriri mune zvekurima.
Biological Kudzora Trichoderma Reesei Powder
Trichoderma reesei ndeye mesophilic uye filamentous fungus. Iyo anamorph yeiyo fungus Hypocrea jecorina. T. reesei inogona kuburitsa huwandu hwakawanda hwema cellulolytic enzymes. Microbial cellulases ane maindasitiri anoshandiswa mukutendeuka kweselulose, chinhu chikuru chemiti biomass, kuita glucose.